ရွှေဖရုံသီး ဝက်သားအဆာသွပ်နဲ့ မာလာငါးခေါက်ဆွဲ
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, May 16, 2011 Monday, May 16, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ချစ်စွာသော ဘလောဂ့်ကြွလာ မိတ်သဟာအပေါင်းတို့ ရွှင်လန်းကျန်းမာပါစရှင်.း)
အင်တာနက်မရတဲ့ အရပ်ကို ၃ရက်လောက် ရောက်သွားလို့ ဘလောဂ့်နဲ့ အဆက်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ ပြန်ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ၀မ်းသာအားရ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် နှုတ်ခွန်းဆက် ဂါရဝပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။﻿ အင်တာနက် မသုံးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာ အလုပ်တွေ အလွန်ရှုပ်နေခဲ့တာကြောင့် စာအသစ်ရေးဖို့လည်း အချိန်မရသလို စိတ်ရောလူပါ မအားမလပ်ဖြစ်တာကြောင့် အသစ်တင်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးခင်မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စားသောက်စရာလေးနဲ့ အားလုံးကို ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေနော်။
ကျွန်မ ဒီနေ့ ဦးဆုံး ဖော်ပြမဲ့ ဟင်းလျှာက ရွှေဖရုံသီး ၀က်သားအဆာသွပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ မဟုတ်သလို ဆန်းဆန်းပြားပြားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းလမ်းကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါစို့နော်။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။ လူအနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး ရွှေဖရုံသီး အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတော့ စားမဲ့သူနည်းတဲ့အတွက် ရွှေဖရုံသီး အသေးတစ်လုံးကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ ရွှေဖရုံသီးလေးကို ထိပ်ပိုင်းဖွင့်လိုက်ပြီး အတွင်းမှာ အစေ့များ၊ အသားများကို ဇွန်းလေးနဲ့ ခြစ်ထုတ်ပြီး ဖယ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အတွင်းက အစေ့များပါတဲ့ အပိုင်းကို လွှင့်ပစ်ပြီး ရွှေဖရုံသီး အသားများကို ချန်ထားပါတယ်။ အပေါ်ပိုင်း ဖြတ်ထားတာလေးကို မပျက်စီးအောင် ဂရုတစိုက် ထားရအောင်နော်
ဝက်သားကို ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံ၊ ငရုပ်သီး အနည်းငယ်(အစပ်ကြိုက်က ) ထည့်ပြီး ကြိတ်ပေးပါတယ်. သို့မဟုတ် အသားညက်အောင် တောက်တောက်စင်းပါ။ ပြီးနောက် ဖယ်ထားတဲ့ ရွှေဖရုံသီး အတွင်းသားများကိုလည်း ဝက်သားတို့နဲ့ ရောပြီး (တောက်တောက်စင်း) ကြိတ်ပေးပါ။ ၄င်းတို့ကို ဆား၊ အရသာမှုန့် တို့ကို ထည့်ပြီး ရောနယ်ပါတယ်။ ကြိုက်တတ်ရင် ရှောက်ကောပါးကောမှုန့်ပါ ရောနယ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အားလုံး ရောနယ်ပြီး အဆာသွပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ဝက်သား၊ ရွှေဖရုံသီးအသားတို့ပါ။
အသားတွေကို ရွှေဖရုံသီးထဲ ခုလို သိပ်ထည့်လိုက်ပါပြီ။
အပေါ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာလေးကို ခုလို အဖုံးလေးဖုံးအုပ်လိုက်ပြီး ရေထည့်ထားတဲ့ အိုးတစ်လုံးပေါ်တင်ကာ ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပေါင်းလို့ ရသလို
ရေထည့်ထားတဲ့ အိုးထဲကို ရွှေဖရုံသီး သုံးပုံနှစ်ပုံမြုပ်စေအောင် ထည့်ပြီး အလုံးလိုက် ထည့်ပြုတ်လည်း ရပါတယ်။ အဲလိုပြုတ်တဲ့အခါ ရေထဲကို ဆားနဲ့ အရသာမှုန့်ပါ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို ရွှေဖရုံသီး အသားထဲကို အရသာတွေ ၀င်သွားပြီး အထဲက ၀က်သားအပြင် ရွှေဖရုံသီး အကာသားပါ စားလို့ ရပါတယ်။ အချိန်ကိုတော့ သတ်မှတ်ချက် မပေးလိုပါဘူး။ အတွင်းက အသားရော၊ အပြင်က အကာသားပါ စားလို့ရအောင် နူးသွားချိန်ထိ ပြုတ်ရ(ပေါင်းရပါမယ်)။
ကဲလေ.. အထဲက အဆာသွပ်ထားတဲ့ ဝက်သားနဲ့ အပြင်က ရွှေဖရုံသီးအသားပါ စားလို့ရပြီဖြစ်တဲ့ ရွှေဖရုံသီး ဝက်သားအဆာသွပ်ဟင်း ရပါပြီ။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, May 12, 2011 Thursday, May 12, 2011 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်က စိန်လုံတောင်တန်းပေါ်က စိန်လုံရွာကလေးမှာ သဘောကျစရာကောင်းတာက တောင်ပေါ်ဒေသထွက် စားသောက်ဖွယ်ရာများ ရောင်းချတဲ့ ဈေးဆိုင်ငယ်ကလေးတွေ ရှိနေတာပါ။ ကချင်ပြည်နယ် စိန်လုံတောင်တန်းပေါ်မှာ ထွက်သမျှ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ အသီးအရွက်တွေ စားသောက်စရာများကို ဒီဈေးဆိုင်ကလေးတွေမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေများ တွေ့ရမလဲလို့ ကျွန်မနဲ့အတူတူ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်...
အဖြူရောင် ခွက်ကလေးနဲ့က တောင်ဆိတ်အဆီတွေလို့ သိရပြီး ဦးချိုနဲ့ ခွာကလည်း တောင်ဆိတ်ချိုနဲ့ တောင်ဆိတ်ခွာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒီအသားတွေက ဂျီသားတွေလို့ သိရပါတယ်။ အမဲသားတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်လို့ ကျွန်မက မေးတဲ့အခါ ဒီရွာမှာ အမဲသားကို ဆတ်သား၊ ဂျီသားလို့ ပြောပြီး ဘယ်သူကမှ မရောင်းကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ရိုးသားတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီး သူတို့ပြောစကားတွေဟာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိသာအောင် ရိုးသားမှုက သူတို့ရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ ထင်ဟပ်လို့ နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂျီသားကို ကျွန်မ၀ယ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရောက်လို့ ချက်စားတဲ့အခါမှာ တကယ်လဲ ဂျီသားအစစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကျွန်မက တောတောင်ပေါတဲ့အရပ်မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းသူ ဖြစ်တာကြောင့် တောတောင်ထဲက အစားအစာတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စားနေကျ ဖြစ်ခဲ့တော့ ဂျီသား၊ ဆတ်သားတွေကို အနံ့ရတာနဲ့ စစ်မစစ် ခွဲခြားတတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီအသားဟာ ဂျီသားအစစ်လို့ သိလိုက်ပါတယ်။
သဘာဝအတိုင်း လှပစွာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကွက်အကွက်တွေနဲ့ မြင်ရတဲ့ အတုံးတွေက ကျွန်မတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာ “သစ်မင်း” လို့ခေါ်ပါတယ်။ သစ်ပင်တကာတို့ရဲ့ ဘုရင်လို့ သတ်မှတ်ပြီး သစ်မင်းလို့ ခေါ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ၄င်းသစ်မင်းကို နေအိမ်တွေမှာ ချိတ်ထားရင်